Waaxda arrimaha dibada Maraykanka oo amartay qoysaska shaqaalaha qunsuliyada Maraykanka in ay ka tagaan Turkiga - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldWaaxda arrimaha dibada Maraykanka oo amartay qoysaska shaqaalaha qunsuliyada Maraykanka in ay ka tagaan Turkiga
Waaxda arrimaha dibada Maraykanka oo amartay qoysaska shaqaalaha qunsuliyada Maraykanka in ay ka tagaan Turkiga
October 30, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Dhismaha waaxda arrimaha dibada Maraykanka. [Sawirka: AP]
Istanbul-(Puntland Mirror) Xubnaha qoyska ee shaqaalaha qunsuliyada Maraykanka ee Istanbul ayaa lagu amray in ay ka tagaan dalka Turkiga, sida ay sheegtay waaxda arrimaha dibada ee Maraykanka, oo soo xiganaysa khataro lidi ku ah muwaadiniinta Maraykanka.
“Waaxda arrimaha dibada waxay go’aankan u gaartay kadib markii ay heshay macluumaad tilmaamaya in kooxo xagjiriin ah ay doonayaan in ay weeraro la eegtaan meelaha ay ka joogaan muwaadiniinta Maraykanka magaalada Istanbul,” waaxda arrimaha dibada ayaa sidaa ku tiri bayaan maanta oo Axad ah.
Qunsuliyada Maraykanka ee Istanbul ayaa wali sii furnaan doonta, sida ay sheegtay waaxda arrimaha dibada, iyadoo intaas ku dartay in amarka uusan saamayn doonin cid walba oo ah diblomaasi Maraykan ah oo xarumo ku leh Turkiga.
Waaxda arrimaha dibada Maraykanka ayaa sidoo kale kula talisay muwaadiniinteeda in ay ka fogaadaan in ay u safraan koonfurta-bari ee Turkiga waxayna ka digeen khatarta u safrida meel kasta oo Turkiga ah.
January 1, 2017 Erdogan: Turkigu waa la dagaalami doonaa argagixisada ilaa laga soo afjarayo
Al-Shabab militants capture Goofgaduud town from Somali government forces
Mareykanka oo sheegay magaca askarigii lagu dilay gudaha Soomaaliya
Washington-(Puntland Mirror) Waaxda Difaaca Mareykanka ayaa aqoonsatay askari Mareykan ah kaasoo lagu dilay gudaha Soomaaliya asbuucii lasoo dhaafay. Bayaan kasoo baxay Waaxda Difaaca ayaa lagu sheegay in Kyle Milliken oo 38-sanno jir ah lagu dilay [...]
Puntland accuses Somaliland of launching war to disrupt visit of President Farmajo
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland government on Monday accused Somaliland of launching war on Puntland to disrupt visit of Somali President to Puntland. “During the early hours of this morning, heavily armed soldiers under the control of [...]